The Ab Presents Nepal » नेकपा सचिवालय बैठकः सरकारको कार्यशैलीको समीक्षा गरिने!
नेकपा सचिवालय बैठकः सरकारको कार्यशैलीको समीक्षा गरिने!
८ असार, काठमाडाैँ-: नेकपा सचिवालय बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले सरकारको कार्यशैलीको समीक्षा गरेर मन्त्री फेरिन आवश्यक भएको निस्कर्ष निकालेका छन् । नेकपाको सचिवालय बैठकमा सरकार गठन भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेको भन्दै सरकारको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको जनाएका छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १५ महिना पुगेको छ । निर्वाचनअघि पार्टीले गरेको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको, मन्त्रीहरुको काम सन्तोषजनक नभएको, पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत अझै सांगठनिक एकता टुंगो लाग्न नसकेको गुनासाे गुनासाे गरेका छन् ।